विदेशमा डाक्टरी पढेका ८८ प्रतिशत फेल ! – Nepali Health
२०७५ असार ३२ गते ८:१८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, ३२ असार । नेपालमा मेडिकल कलेज कम भएकाले मेधावी विद्यार्थी पनि डलर तिरेर विदेश जान बाध्य भएको बहस चलिरहेको छ । तर, विदेश कस्ता विद्यार्थी गएका छन् ? मेडिकल पढ्ने योग्यता भएका कि पैसा तिर्ने क्षमता भएका भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर छ ।
एमएस्सी नर्सिङ अध्ययनका लागि चीनबाट प्राप्त २५ वटा छात्रबृत्ति कोटा गुम्दै